करिब चार महिनापछि १ अर्बभन्दा बढीको कारोबार - Naya Patrika
इटहरीमा बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ३० घाईते
प्रदेश ७ मा प्रहरी दरबन्दी बढाउन मुख्यमन्त्री भट्टको माग
करिब चार महिनापछि १ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १४ मंसिर | मङि्सर १४, २०७४
बुधबार बजारमा १ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । यसअघि साउन २२ गते १ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । त्यसयता विभिन्न कारणले नेप्से परिसूचकमा उतारचढाव आएसँगै कारोबार रकम पनि रू. ५० करोडको आसपासमा रहने गरेको थियो । अघिल्लो दिन नेप्सेले ‘डबल बटम’ अर्थात् अंग्रेजी अक्षरको ‘डब्लु’ आकृति पूरा गरेसँगै नेप्से उकालो लाग्ने विश्लेषण गरिएको थियो । सोही विश्लेषणपछि लगानीकर्ताको मनोबल बढेको देखिन्छ । पछिल्लो एक महिनाको परिसूचक हेर्दा यस्तो देखिएको हो । फलस्वरूप अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन नेप्से र कारोबार रकम दुवै बढेको छ । पहिलो चरणको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र दोस्रो चरणको चुनाव तयारीसँगै बजारमा पर्याप्त पैसा आएको छ । सोमध्ये केही बजारमा पनि आएको एक ब्रोकरले बताए ।
बैंकहरूले कर्जा तथा निक्षेपमा ब्याजदर घटाएका छन् । यसले पनि बजारलाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्न टेवा पुगेको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २६ अंक बढेको छ । यस दिन १ सय ६३ कम्पनीको ८ हजार १ सय ६९ पटकको कारोबारमा रू. १ अर्ब ५ करोड ३५ लाख ७१ हजार ४ सय ३९ बराबरको २० लाख ५७ हजार १ सय ६५ कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कुल बजार पुँजीकरण रू. १४ अर्ब २४ करोड बढेर रू. १७ खर्ब ८४ अर्ब पुगेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन २ दशमलव ५७ अंक बढेर ३ सय २४ दशमलव शून्य ३ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ५९ दशमलव ४४ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिद–बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
बुधबार बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीको रू. ६ करोडभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ । कारोबारमा आएको नागबेली लघुवित्त विकास बैंक र रिलायबल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य करिब ९ प्रतिशत बढेको छ । हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको सेयरमूल्य भने यस दिन करिब १० प्रतिशत घटेको छ । यस दिन कारोबारमा आएका १ सय ६३ कम्पनीमध्ये १ सय २२ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने २७ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १४ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
होटेल समूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक २ दशमलव ४५ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी, माइक्रोफाइनान्स समूहको परिसूचक २ दशमलव २९ प्रतिशत, ट्रेडिङ समूहको १ दशमलव ४ प्रतिशत, बिमा समूहको १ दशमलव २५ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत र ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने यस दिन १ दशमलमव ३ प्रतिशत घटेको छ ।
अन्डरवर्ल्ड डन दाउद-गोरे ‘कनेक्सन’
कम्युनिस्ट थिइनँ भने आत्महत्या गरिसक्थेँ: गोपाल किराँती
अदालतमा बयान दिँदै ‘गोरे’
लमजुङका कैदीबन्दीलाई सिलाइ कटाइ तालिम